टिभी बनाउँन आएका अप्रेटरसँग सम्बन्ध बनाउँदै गर्दा महिला डाक्टर मृत – Online Khabar 24
टिभी बनाउँन आएका अप्रेटरसँग सम्बन्ध बनाउँदै गर्दा महिला डाक्टर मृत
एक महिला डाक्टरको जीवन समा’प्त पारिएको छ । भारत, उत्तर प्रदेशमा यस्तो घ’टना भएको हो । त्यहाँको ताज नागरी आग्राको पोश क्षेत्रमा शुक्रवार दिउँसो एक महिला डाक्टरको जीवन समा’प्त पारिएको हो । यो घट’नाले सम्पूर्ण क्षेत्रमा सन सनी फै’लाएको छ ।
परिवारले टिभी ठिक गर्न आएको अपरेटरमाथि आरो’प लगाएका छन् । यद्यपि प्र’हरीले यस सम्बन्धलाई प्रेम प्रसंगसँग हेर्दैछ । प्रह’री नजिकै सीसीटीभी क्यामेरा खोज्दै छ । एडीजी देखि सबै प्रहरी चौकीको बल घटनास्थल पुगेको छ ।
जानकारीका अनुसार प्लास्टिक सर्जन डा. अजय सिंघल कमला नगर इलाकामा बस्दै आएका थिए । उनको डेन्टिस्ट (दाँतको डाक्टर) पत्नी ३८ वर्षीया डा. निशा र दुई बच्चाहरुसँगै थिइन् । परिवारका सदस्यहरूले भने कि अपरेटर शुभमलाई बेलुका बोलाइएको थियो, जब टिभी केबलको समस्या थियो ।
शुभम घरमा आए र दुई बच्चाहरूलाई कोठामा बस्न भनेका थिए । यसै बीचमा, शुभम निशासँगै अर्को कोठमा भएको भनिएको छ । केही समयपछि जब निशा चि’च्याईन, तब बच्चाहरू बाहिर आएका थिए । बच्चाहरुलाई शुभमले तरकारी काट्न प्रयोग हुने औजार देखाउँदै डराउन खोजेका थिए । प्रहरीले सीसीए सटीभी फुटेजमा शुभम घरभित्र आइरहेको बताएको छ ।
यो पनी पढनुस
ससुरा र देवर मिलेर म सँग सम्बन्ध राखे, देखेर विरोध गर्दा श्रीमानलाई सिध्याए
जहाँ महिलाहरु जीवनभर एकपटक यस्तो समयमा मात्र नुहाउँछन् ! पुरा खबर
स्रोतका अनुसार महिला डाक्टर र शुभम बीच बारम्बार लामो फोन वार्तालाप हुँदै आएको देखिन्छ । प्रह’रीले यसको प्रमाण भेट्टाएको छ । केही दिन अघि उक्त महिला डाक्टरले आरोपी शुभमलाई उनको ट्रान्स यमुना क्षेत्रमा मोबाइल शप खोल्न आर्थिक सहयोग पनि गरेकी थिइन् ।
स्तब्ध छिमेकीहरू पनि यस सम्बन्धलाई लिएर निशाका पतिले पनि जानकारी पाएको बताउँछन् । पतिले सम्बन्धबारे जानकारी पाएपछि उनीहरुको सम्बन्ध संकटमा पर्न थालेको पनि बताइएको छ । यद्यपि प्रह’रीले आ’रोपितको पहिचानको बारेमा थप अनुस’न्धान गरिरहेको छ ।
जनबोली बाट साभार गरीयको
Posted in बिदेश
Prevससुरा र देवर मिलेर म सँग सम्बन्ध राखे, देखेर विरोध गर्दा श्रीमानलाई सिध्याए
nextइन्स्पेक्टरसँग लिभ इन टुगेदरमा बसेकी महिला मृ’त फेला,